HUMNA BARREESSUU KEESSA JIRUUN GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA!! -
bilisummaa December 11, 2013	Leave a comment
Beekan Gulummaa Irranaa jedhama. Lixa Oromiyaatti dhalate. Barnoota digirii jalqabaa Yunivarsiitii Jimmaatti xumuree isumaan barsiisummaaf Yunivarsiitii Amboo seenee barsiisaa turuun barnoota digirii lammataatiif Yunivarsiitii Finfinnee seene. Digiriisaa lammataa xumuree Yunivarsiitii Ambootti deebi’ee ammas takka barsisee digirii sadaffaa (dooktorummaasaaf) Yunivarsiitii Finfinneetti deebi’ee waggaa lammaffaa barataa jira. Nama umuriin 29 yoo ta’u, yeroo ammaa kana kitaabota Afaan Oromoo 19 kan barreesseefi kitaabota 50 oliif gulaalaa kan ta’ee jiruuf dhaloota qubee keessaa barreessitoota hedduu of duukaa hiriirsee hojjechiisaa kan jiru Beekaniif SAFUUn akka armaan gadiitti gaaffiif deebii godheefi jira.
Previous Duuli duguugiisa shanyii kan qaccee dhaloota Oromoo fuulleeyfate ammaas bifa haarayaan geggeeyfamaati jira.
Next BARRUULEE AFAAN OROMOO BEEKANIIN BARREEFFAMANIIFI GULAALAMAN TOKKO TOKKO